Eyona App ifanelekileyo yokufumana ababhalisile kwiYouTube ers ➡️ Abalandeli ▷ ➡️
Meyi 12, 2021 0 IiCententarios 445
Baninzi ngakumbi abantu abafunda ngamathuba okwenza isiteshi sabo seYouTube kwaye uqale ukwenza imali ngeli qonga. Ukuba kunjalo, masixelele ukuba uza kudinga uncedo lwababhalisile. Kungenxa yoko le nto namhlanje sikubonisa ezinye iindlela zokufumana abalandeli abatsha kwi-YouTube.
Ababhalisi ngundoqo kwi-YouTube. Iqonga lifuna inani elincinci labalandeli ukuze bakwazi ukwenza imali ngejelo lethu kwaye ke uqala ukwenza imali ngokwenza umxholo wee-audiovisual. Kukho ezinye izicelo ezinokusinceda sifumane ababhalisile kwaye apha sikuxelela ukuba zeziphi ezizezona zibalaseleyo.
Ukukhula kwiYouTube akukho lula
Abasebenzisi abaninzi beqonga leYouTube benza imali ngokufaka umxholo kwesi sicelo, nangona kunjalo, inye into ekufuneka yenziwe icace kwaye ukukhula kwiYouTube akukho lula njengokuba abanye bekholelwa.
Ukongeza abarhumeli abatsha kwisitishi sethu kuyakufuneka ukutyala ixesha elininzi eqongeniKodwa ayinguye wonke umntu onesakhono sokuchitha iiyure esenza umxholo weapp. Kule meko uncedo olongezelelweyo alunakuba lubi.
Yiyo loo nto namhlanje sifuna ukukwazisa ezinye zezona zicelo zibalaseleyo zokufumana ababhalisile kwiYouTube. Abayi kusenzela wonke umsebenzi, kodwa baya kusinceda senze umsebenzi wokongeza abalandeli ungabinangxaki kwaye uyadika.
Kwiwebhu sifumana uluhlu olubanzi lwezicelo ezenzelwe ukufumana ababhalisile kwiYouTube. Kukho ezisebenzayo nezithembekileyo, ngelixa ezinye zisenza izithembiso ezingezizo.
Sikuzisa umphezulu ngezona zicelo zibalaseleyo ukufumana abalandeli kwiYouTube. Qaphela kwaye ufumane uninzi kwezi zixhobo zimangalisayo.
Enye yezona zixhobo ezilungileyo kakhulu ezinokukunceda ufumane ababhalisile abatsha kwi-YouTube ngokuchanekileyo TubeMine. Ngalesi sixhobo uya kuba nakho ukunika amandla amakhulu kwisitishi sakho, kwaye eyona nto ibaluleke kakhulu kukuba iya kuba lixesha elifutshane kakhulu.
Ayizukufuneka ukuthenga abalandeli. Indlela yokusebenza yale sicelo ikakhulu iquka Yabelana ngeevidiyo zethu nabo bayinxalenye yale ndawo. Ukuba sifuna ukwabelana ngevidiyo siza kufuna "iingqekembe" onokuzithenga okanye uzifumane ngokubukela iividiyo zabanye abasebenzisi beapp.
Esi sicelo simangalisayo besingayi kulahleka kuluhlu lwethu. Siyabulela kuyo, siya kufezekisa ababhalisile abaninzi, ukuthandwa kunye neembono ezinkulu ngaphakathi kweqonga le-YouTube.
Isebenza ngokulula: Ufaka ividiyo, ukope ikhonkco kwi-app kwaye wenze ukunyusa ukutsala umdla wabanye abasebenzisi. Ukwenza oku uzakufuna "iingqekembe" oza kuzifumana ngokujonga umxholo wabanye abasebenzisi.
I-UTViews -Izimvo ezixhasayo
Apha sibonisa enye yeendlela ezizezinye zokufumana ababhalisile kwiYouTube ngokulula nangokukhawuleza. Esi sicelo sisebenza ngokufanayo nezinye. Kuya kufuneka wabelane ngevidiyo yakho kwi-app kwaye baya kunceda abanye abasebenzisi ukuyibona.
Uya kwenza njalo kufuna iimali zemali ukuze zisetyenziswe. Ufumana olu hlobo lwemivuzo ngokujonga nje umxholo abanye abasebenzisi abalayisha kwiqonga.
1 Ukukhula kwiYouTube akukho lula
2 Ezonaapps zibalaseleyo
2.3 I-UTViews -Izimvo ezixhasayo